Nhau - Runako rwekuvandudza, Iyo itsva maitiro e "kugadzira" muChina
Runako rwekuvandudza, Iyo itsva maitiro e "kugadzira" muChina
Masikati emusi waDecember 17th, iyo 2019 "Runako Rwokugadzira" musangano wepagore nemusangano wepasirose, unotsigirwa neChina Made Network neChina Council yekusimudzira kweInternational Trade (CCPIT), wakaitirwa kuNanjing Greenland Zipong Intercontinental Hotel. SGS, BV, TUV Nande, vamiriri vemakambani anokunda uye vatambi venhau vakaungana muJinling kuzopupurira chiitiko ichi chine mbiri chakaitwa muChina. Zvimwe zvigadzirwa zvakakunda zvakaunzwa pamhemberero yemubairo.
Parizvino yekujekesa, mabhizinesi makumi mana nematatu ane zvigadzirwa 57 zviri kupenya jinling.
Iyo "Runako rwekugadzira" kusarudzwa kweChina kunoongorora yakagadzirwa-muChina neine ziso rakasimba, kutsvaga zvigadzirwa zvakakosha; Kubva pakukumbirwa kwezvinhu zvigadzirwa muna Ndira kusvika pakuongororwa kwekutanga muna Gumiguru, zvigadzirwa zviuru zvishanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu zvakagamuchirwa. Mushure mekuongorora kwekutanga, zvigadzirwa makumi mana neshanu zvakapinda muchikamu chekupedzisira chekuyedza, uye ipapo ongororo yakaitwa kubva pazvinhu zvemhando yezvigadzirwa, kukosha kwehunyanzvi, kudyidzana kwevanhu nekombuta, kuchengetedza uye kuchengetedza zvakatipoteredza, aesthetic athari uye zvimwe zvinhu. Pakupedzisira, zvigadzirwa makumi mashanu neshanu uye mabhizinesi makumi matatu akakunda iyo yekutanga.
Fujian Fenan Aluminium boka rakamira kunze uye rikawana mubairo.
"Nyowani iri kurarama, yakareba ipuranga; Iyo nyowani ichapfuura, iyo tsaru ichagara." Kubva pane vanhu kuenda kudzimwe nyika, tinga svikira sei kwatiri kuenda? Tinga gura sei gomba rekusimudzira uye Pierce “musika?” Mhinduro ndeyoku “sunungura” kudiwa kwemusika uye kuita hunyanzvi hweshasha.
FOEN Fen 'inotarisa mukubatanidza simba idzva nezvivakwa zvechinyakare, kuunza hunyanzvi hutsva, mhando nyowani, mazano matsva uye masevhisi matsva kumusika, kuziva musiyano wakasarudzika, kuvandudza hushamwari hwechiratidzo, kugara uchiparadzira izwi reChinese brand kunyika, uye kugadzira nyika inodanana neMade-mu-China.